अभिनेता अनमोल केसीलाई कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्का!! - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
अभिनेता अनमोल केसीलाई कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्का!!
काठमाडौँ , २४ साउन ।
यति बेला कोरोना भाइरसले कसैलाई पनि छोडेको छैन । दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै त्रास र असुरक्षित महसुस भइरहेको छ । यसैबिच लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै चलचित्र क्षेत्र पनि केही चलायमान भएको थियो । म्युजिक भिडियो लगायत छोटो समयमा छायाङ्कन सकिने विज्ञापन रियालिटी शोज हरूको छायाङ्कन तथा प्रसारण सुरु भएको छ ।
तर काठमान्डौ लगायत देशका धेरै स्थानमा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन् । यसले छायाङ्कन तथा अन्य कार्यक्रम वा समारोहमा सहभागी भएका कलाकार पनि सङ्क्रमित हुने जोखिम बढेको छ । यसै बिच अभिनेता अनमोल केसीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आशङ्कामा परीक्षण गरिएको छ । केही दिन अगाडी एक स्कुटरको विज्ञापन छायाङ्कन गरेका थिए ।
यसै क्रममा छायाङ्कनमा संलग्न एक टिम मेम्बरलाई कोरोना पोजेटिभ देखी पछि अनमोलले पनि टेस्ट गराएका हुन् । उनको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । उनले घरमा नै केही समय आराम गरेर दुई दिन अघी टेस्ट गराएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । अनमोलले लकडाउन खुलेसँगै केही विज्ञापनको सुट गरेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै साउन अन्तिम साता फ्लोरमा जाने भनिएको अनमोल को मुख्य भूमिका रहने चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’ पुनः पछाडि धकेलिने पक्का पक्की भएको छ ।